Ungagcina njani i-parmesan egayiweyo
Cheese! Mhlawumbi akukho mntu ongathandi ushizi. Ngusiphi isantya esingenasityukhi esineqhekeza leshizi kunye nekomityi yekhofi eshushu? Akunjalo? Ukongezelela, kukho ininzi yeentlobo zeeshizi kwaye wonke umntu uya kuzifumanisa ukuba uyona enye ishizi: i-fresh, i-salted okanye ingenayo izongezo. Namhlanje siza kubeka ingqalelo kwi-cheese ngegama elinomdla njengelinye i-parmesan, kwaye sifumane nendlela yokugcina i-parmesan egayiweyo.
I-Parmesan ibhekisela kwizilwanyana ezinzima zesiTaliyane. Igama elichanekileyo li-Parmigiano Reggiano, okanye iParmigiano Reggiano. Intloko ye-parmesan inkulu kakhulu-malunga neekhilomitha ezingama-40, ngoko ukuthengiswa kweeshizi sele kusepakishwe.
Ukuba uthenge i-cheese eninzi, ngoko kufuneka nje ukwazi ukugcina kakuhle iParmesan.
Ngaba uthenge intloko okanye iqela elikhulu lohlobo oluhle kakhulu lweeshizi efana neparmesan? Ukuyigcina kule fomu kulula. Gqulela ishizi kwilinen okanye kwi-gauze. Ukwenza oku, ixutywe emanzini imizuzu emininzi, kwaye ke ngokucokisekileyo iminyanise, uvumele ukucima amanzi ngokupheleleyo. Ingubo kufuneka ibe yinyameko, kodwa ingabi manzi. Ukugqwesa ushizi ngendwangu, ngaphezu kwayo yonke le "udidi" olufakwe kwifilimu ye-polyethylene okanye i-foil ejwayelekile. Oku kuya kuthintela intsimbi ukuba iphele. Emva koko yonke le phakheji ifakwe kwifriji kwiqumbi elomileyo. Ukuba uthenge itekisi ekusebenziseni kwangaphambili, ungayigcina efrijini.
I-Grated Parmesan ingagcinwa kwiibhagi ezikhethiweyo ze-hermetic, zilandelwe ngokufaka i-foil kunye nokufaka efrijini. Le ndlela ikuvumela ukuba ugcine ushizi ovuthiwe ngeveki. Kodwa ke kungcono ukusebenzisa i-cheese njenge-additive kwi-sauces, kwaye kungekhona nje nge powder.
Ngokuphathelele izitya ezikhethekileyo, ezenzelwe ukugcina i-parmesan shizi okanye i-Parmesan ebizwa ngokuba yi-Parmesan. Ingaba yimiba emibini:
Into ebonakalayo ifana nesitrato eselunxwemeni, inkulu kuphela ngobukhulu kunye nobukho be-strainer. Ngolu hlobo lweeshizi uthelela nje kwisitya esilungisiwe.
Olu hlobo lwe-parmesanza yinqanawa encinane ene-lid okanye i-spoon, enokulinganisa inani elifunekayo leshizi kwaye ungeze kwisitya.
Xa usebenzisa i-parmesan ushizi, i-grates ye-Parmesan ingagcinwa ukuya kwinyanga kwaye ngexesha elifanayo igcine zonke iimpawu ezinokuthi zilungele kwaye zisebenzise.
Ukuveliswa kwee-cheese kuneentlobo ezininzi zeentshizi ezidumile emhlabeni jikelele, ziquka i-parmesan cheese. Akunandaba nokuba yeyiphi iitya kunye nendlela ozisebenzisa ngayo i-parmesan, kwaye ungakanani ixesha oza kugcina kwaye kwaye uluphi uhlobo. Kodwa kusekuhle ukuyidla ngokukhawuleza, kuba ukunambitheka okwenyaniso kunye nephunga leeshizi kunokuhambisa kuphela iinqununu kunye nezicatshulwa.
Ezili-10 ezininzi izinto ezichasayo
Ukuhlamba umatshini wokuhlamba
Indlela yokudibana kunye nendlela yokwenza unyaka wamahashe?
Indlela yokucoca indlu kakuhle
Iingcebiso eziwusizo zomncedisi wangempela azenzekanga kakhulu
Indlela yokujamelana nokubandayo okuqhelekileyo?
Kukho ukukholisa intombi intombi entsha?
Ukutheleleka kwamathumbu emathunjini kunye nokunyango lwabo
Indlela yokufundisa ngokukhawuleza iproti?
Kubaluleka kweklabishi kwizinto eziphilayo
Isaladi "inkukhu ngegromegranate"
Ubisi lwe-Bird phantsi kwe-cherry jelly
Iikiti ze-Caribbean shish
Umzala wakhe kunye nenkukhu
Ukusila ngesandla emva kwesifo
Iingcebiso kubazali ngokukhusela kwabantwana
Usulelo lwe-intrauterine ngexesha lokukhulelwa
Konke malunga neenkonzo zothando
Isaladi ye "Mazurka"